10 loại cây bóng mát tuyệt đẹp và quý hiếm tại Việt Nam | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
10 loại cây bóng mát tuyệt đẹp và quý hiếm tại Việt Nam | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: 10 loại cây bóng mát tuyệt đẹp và quý hiếm tại Việt Nam | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Okwangoku, xa imozulu isanda ukutshintsha, imfuneko yokuhlobisa indawo yokuhlala yekhaya elihle nelidlamkileyo: lipholile ehlotyeni, lifudumele ebusika ngemibala eqaqambileyo neyonwabileyo yimfuno engxamisekileyo yabantu abaninzi. Imithi ye-accent yokuhombisa sisisombululo esikhulu ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ezingentla. UHoala ukuxelela iindidi ezili-10 imithi yomthunzi ezinqabileyo, ezintle zizisa izibonelelo ezininzi: iziqu, amagqabi anobuhle obukhethekileyo njengento ebalaseleyo yegadi, iingcambu, iziqu, amagqabi, iintyatyambo, iziqhamo … ukutya, amayeza kunye nezinye izinto ezininzi ezisetyenziswayo.
Ekuqaleni. Umthi womthunzi omhle Umthi weentyatyambo owonwabileyo
Ngokunyanisekileyo kwigama layo, umthi weentyatyambo ovuyayo uzisa ulonwabo kumlimi ngobuhle bomthi ukusuka kumncinci ukuya kumdala: xa eselula, amagqabi anesimo sentliziyo okanye isangqa esigcweleyo kunye nombala obomvu obomvu obumnyama.
Xa ikhulile, intyatyambo eyonwabileyo ikhula ukusuka esiqwini ukuya phezulu inombala wothando omfusa-pinki okhangeleka okwentyatyambo yesilika entle, amagqabi awela ngaphambi kokuba umthi utyatyambe, ngoko sonke isityalo sigqunywa ngumkhusane weentyatyambo. yenza ababukeli bangakwazi ukususa amehlo abo.
Iintyatyambo azikho nje ezintle kwaye zinevumba elimnandi, kodwa kunye nesitya esikhangayo esinencasa engenakuphikiswa emnandi nemuncu enokuthi umntu athande, unokwenza i-stir-fried, ebilisiwe, isaladi, ice cream, isiraphu, isuphu, ikhekhe …. ityiwa njenge-ertyisi.Umthi wonke liyeza, umthi womthi owonwabileyo unokhozo oluhle, olugudileyo, olumenyezelayo olufana nokuqatywa kwevanishi ukwenza izacholo okanye ifanitshala, ethandwa kakhulu. Umthi weentyatyambo owonwabileyo nawo unokwenziwa ibhonsai entle kakhulu
2. Umthi weMagnolia
Umthi Magnolia >>> uneempawu ezifanayo nezomthi weentyatyambo owonwabileyo: umthi uvuthulula amagqabi awo uze emva koko ube neentyatyambo, nto leyo eyenza umthi ubone iintyatyambo eziqaqambileyo, ezintle nezinkulu. I-Magnolia ayinayo nje imilo ehlekisayo, iintyatyambo zihlala ngaphezu kwenyanga enye, kodwa intyatyambo nganye ikwanevumba elimnandi nelinomtsalane. Ubuhle bentyatyambo ye-magnolia itsala naliphi na iliso. Izityalo zifana nomoya opholileyo, otyalwe kwiindawo ezininzi ukusuka kwiibhalkhoni ukuya kwiipaki.
3. Umthi wentyatyambo yecherry yaseJapan
Umthi ukuqhama kweetsheri >>>IJapan idume kwihlabathi liphela ngobumi bayo obuhle obufana nerozi kunye neentyatyambo ezigqithisileyo. Lo mthi ukwavuthulula amagqabi ngaphambi kokuba utyatyambe, ngoko wonke umthi uzele ziintyatyambo. Iintyatyambo zecherry yaseJapan ezifuywayo zizinzile, zomelele, kwaye ziyamelana nobungqwabalala kunezethu.
2. Umdiliya womthi
Umdiliya weWood nokwaziwa njenge brazil vine, umdiliya ophantsi komhlaba okanye umdiliya waseMzantsi Melika luhlobo lomdiliya imithi yomthunzi ukuchukumisa nabani na xa ebona lo mthi okokuqala. Njengomthi owonwabileyo, umdiliya waseBrazil uneentyantyambo ezisuka ezantsi ukuya phezulu, xa umthi udubula umthi wonke ufana nomjelo omnandi wobisi onamawaka eentyatyambo ezimhlophe ezinobisi, ivumba elimnandi. Xa umthi uvelisa isiqhamo, wonke umthi ujika ube luhlaza kunye neziqhamo ezitsha zophondo lwendlovu, uze wonke umthi ube pink ngokuqaqambileyo ngenxa yesiqhamo, xa isiqhamo sivuthiwe, utsalwa ngumbala omhle omfusa omenyezelayo. Umdiliya wase Brazilian unevumba elimnandi elinokutyiwa ngoko nangoko emva kokuvunwa. Iidiliya ezinomthi zisitya esithandwa ngabantu abaninzi ukusuka kubantwana ukuya kubantu abadala. Into ebangela umdla kukuba imithi yeziqhamo ithe saa unyaka wonke, ngoko sonke sinokuyonwabela ivumba elimnandi lesi siqhamo sithandekayo ngamaxesha amane onyaka.
Inqaku elibalulekileyo lemithi yeziqhamo kwi-trunk kukuba akufanele sivumele abantwana ukuba bakhwele kwi-trunk ukuze baphephe ukuchatshazelwa ngamagqabi, okwenza umthi ungakwazi ukudubula nokuthwala isiqhamo.
3. Umthi we-Honeysuckle
Umthi weginkgo ngumthi omdala, odumileyo ehlabathini. Amagqabi e-ginkgo ayamangalisa kakhulu, ekwindla, amaqabunga e-ginkgo ajika ukusuka kwi-turquoise enhle ukuya kumbala wegolide. Amagqabi amahle e fan, ephaphatheka emoyeni okwemilenze yedada kwisibhakabhaka esiluhlaza sasekwindla, enze umfanekiso omhle.
Umthi we-Ngan Hanh ungomnye wezityalo ezinezicelo ezininzi ebomini, uninzi lwamacandelo omthi we-Ngan Hanh njengamagqabi kunye neziqhamo. Iziqu .. zonke zineempembelelo zokuphilisa ezingummangaliso. . KumaJapan, iginkgo ngumthi ongcwele, uphawu lokuzinza kunye nokuphila ixesha elide. I-Honeysuckle inamandla okufunxa ukukhutshwa kwamashishini kunye nothuli. Imithi ifunxa i-carbon dioxide (CO2) kathathu kwaye ikhuphe i-oksijini (O2) amaxesha angama-5-6 ngaphezu kwezinye izityalo. Ukuba ukukhulisa i-ginkgo ngomlinganiselo omkhulu kwizixeko zoshishino kuya kuzisa inzuzo enkulu kwindalo, ngoko ikwabizwa ngokuba “ngumthi wokusingqongileyo”.
I-Honeysuckle inencasa ethambileyo kwaye isetyenziswa isentsha okanye iphekiwe, xa iphekiwe, ifana ne-chestnut, isoloko isetyenziswa endaweni yembewu yelotus.
Abantu baseJapan bahlala besebenzisa i-ginkgo kwimisitho yeti njengeelekese kunye nezimuncumuncu. Isiqhamo esidaywe bubomvu sisetyenziswa kwimibhiyozo, sisetyenziswa emitshatweni, ukunceda ukugaya, kunye nokukhupha utywala. Ukongeza, isetyenziselwa ukwenza iikeyiki, iilekese okanye iviniga kwaye icutshungulwe njengemifuno. Isiqhamo siyabhaka, sibiliswe okanye sitshiswe ngamaqanda, sixutywe ne-porridge, sidliwa ngerayisi, amakhowa, imifuno kunye ne-tofu. Ioli yembewu isetyenziswa njengamafutha ezibane. Amagqabi omthi weginkgo aneempawu ezininzi zonyango asetyenziselwa ukwenza iyeza, ukusela okanye ukwenza iti.
4. Umthi wemaple obomvu
Imithi emincinci yeemaple ikwabizwa ngokuba yimithi yeemaple yolu hlobo umthi womthunzi omhle kunye neempawu zamagqabi anamaphethelo abukhali, iingcambu ezintle kakhulu, amaqabunga abomvu abomvu ngokuxhomekeke kwiindidi, kunye nombala obalaseleyo wamagqabi entwasahlobo xa umthi uqala ukuhluma. Yaye umbala womthi ubonakala kakhulu entwasahlobo xa umthi udubula nasebusika, xa amagqabi etshintsha umbala ngaphambi kokuba awele emhlabeni. Ukongeza kubuhle bamagqabi, okanye iingcambu ezininzi kunye namalungu afaneleke kakhulu kwibhonsai, umthi wemaple uneentyatyambo ezikhethekileyo. Iintyatyambo zeemaple zivela ngoAprili ukuya kuMeyi.
Emva kokungeniswa eVietnam ixesha elithile, umthi obomvu we-maple ukhula kakuhle kunye neemeko zemozulu ezipholileyo, kodwa ukuba imozulu inelanga kakhulu, umthi unokutshisa kwaye ulahlekelwe onke amaqabunga awo.
Siqhele umfanekiso wamagqabi e-maple, kodwa abantu abaninzi bayamangaliswa ukubona imbewu yabo. Xa uqala nje, kubonakala ngathi amabhabhathane egadini. Khawube nomfanekiso wakho ngalo lonke ixesha uvuka, isitiya sakho sikhazimla ngombala obomvu oqaqambileyo oxutywe namagqabi aluhlaza ezinye izityalo. Ngaphezu koko, umbala wegqabi elibomvu lemaple yaseJapan nayo izisa ithamsanqa kumoya wabantu baseVietnam.
5. Umthi wephoenix omfusa
I-Purple phoenix sesinye sezityalo ezenza iindawo ezintle zomhlaba eHanoi ngenxa yeentyatyambo ezimfusa eziphuphayo, intyatyambo nganye inemilo eyahlukileyo, eyahlukileyo kwimibala eqhelekileyo yephoenix, umtya ngamnye weentyatyambo ezimfusa. Amaphupha enza wonke umntu abe neemvakalelo xa ejonge bona.
Iphoenix emfusa idla ngokudubula ngo-Epreli, nto leyo ebonisa ihlobo elizayo.
Indlela yamaphupha ephoenix emfusa esilahlekileyo kwiparadesi yombala omfusa kunye nevumba elimnandi
Abo bathanda iphoenix emfusa basoloko benemvakalelo ebuhlungu xa bejonge izihloko zeentyatyambo ezimfusa, zikhupha isiqhumiso. Xa iphoenix emfusa ifikelela esiphelweni, lixesha apho iphoenix ebomvu iqala ukubonisa umbala wayo elangeni lasehlotyeni.
6. Isityalo seLotus
Umthi weLotus Ikwaziwa ngokuba ngumthi obandayo wemagnolia, sisityalo esinemithi, umthi omhle wokuma komhlaba. I-Earth Lotus imhlophe qwa, ijiyile inamaphiko kwaye inevumba elimnandi kunelotus yamanzi. Ukusuka kwihlumelo ukuya kwintyatyambo, emile okwelotus yamanzi, umthi obandayo we-magnolia utyatyamba ngasekupheleni kwentlakohlaza nasekuqaleni kwehlobo. Iintyatyambo zimhlophe, zipinki kwaye zityheli zilingana nesitya serayisi, apho umbala wentyatyambo emthubi ngowona uxabisekileyo.
I-lotus yomhlaba inevumba elimnandi kunelotus yamanzi, nangona intyatyambo yomile, ivumba lisahlala, ngoko ke ukusebenzisa iLotus eyomileyo kunevumba elimnandi kwaye kudala imvakalelo yokuphumla.
Imithi ye-Dat Sen eneentyantyambo ezimhlophe, iintyatyambo ezinkulu ezixutywe kumaleko ngamnye wamagqabi zidala i-accents yesithuba. Ukuma phantsi kwe-canopy yomthi we-lotus, ukuvumba iintyatyambo ezimnandi, kunceda ukuphumla kunye nokunciphisa uxinzelelo.
Isityalo se-lotus sineempembelelo ezininzi ebomini kunye nempilo: iintyatyambo kunye namaqabunga esityalo se-lotus zisetyenziselwa ukunyanga intloko, ukunciphisa uxinzelelo, ukunyanga i-allergies, i-asthma kunye nokulahlekelwa ubunzima.
7. Umthi we-Osaka
Kwakhona kuthiwa icanaryunomadudwane wamanzi,imithi yomthunzi malunga ne-5-20m ukuphakama.Intyatyambo yomthi waseCanary inombala otyheli welamuni, amagqabi athambileyo ayanda, iintyatyambo ezingalunganga, lonke ikhonkco lentyatyambo libonakala lithambile kwaye liyaphupha. Ngokwesiqhelo, imithi yeOsaka idla ngokuwa de phantse onke amagqabi aqalise ukudumba. Iintyatyambo ngobukhulu amaqela ashinyeneyo, akhangeleka emhle kakhulu. Iqela ngalinye leentyatyambo ezityheli ezijinga emoyeni lenza ilanga lasekuseni liqaqambe ngakumbi.
I-canary ikhula kakuhle kwindawo enelanga kunye neyomileyo, engafanelekanga kwimozulu eyomileyo okanye ebandayo nangona inyamezela imbalela kunye netyuwa.
Ngenxa yombala otyheli ojonga iliso, ukukhulula iqela ngalinye, ngamanye amaxesha umthi uphela utyheli, ngoko umthi we-canary uvame ukukhethwa ukuba utyalwe kwindawo yezindlu, iivillas, iipaki. Ixesha elide ukususela ngo-Epreli ukuya kuJulayi, lo mthi uvame ukukhethwa ukuba utyalwe ngendlela egxininisekile yokudala iindlela zeentyatyambo zegolide, kodwa ngenxa yamagatsha awo amade, ikhula ngokukhawuleza, ngoko ifanelekile kwiindawo ezivulekileyo.
8. Umthi we-banyan wasemntla-ntshona
yolohlobo umthi womthunzi owaziwayo EVietnam, igama elithi ukuvinjelwa kweentyatyambo ngokolwimi lwaseThai lithetha ukuba intyatyambo eswiti intle kwaye inomtsalane.Umthi unesiqu esingenanto, hayi ngokuthe nkqo, kodwa esibhityileyo, esijijekileyo, esinegatsha njengetafile.Isandla simise indalo. Umbala wentyatyambo ucocekile, unomtsalane
Ebusika, umthi webanyan uyawavuthulula ngokwawo amagqabi, ugalele incindi esiqwini sawo, uze ulinde intwasahlobo efudumeleyo ukuba intshule amathupha. Amandla omthi webanyan womelele kakhulu, enoba usendulini eyomileyo enengca okanye ubambelele kumawa amatye, lonke ixesha lonyaka wokutsha, umthi webanyan uvuka ungafi. Xa utyatyamba, umthi we-banyan ukhangeleka ngathi uneentyantyambo kuphela kodwa awunamagqabi.
Iintyatyambo ze-Ban ziqhakaza minyaka yonke ekuqaleni kukaFebruwari (ikhalenda yenyanga), eyona nto intle kakhulu kwaye intle kakhulu ekuqaleni kuka-Matshi, ekuqaleni kuka-Epreli, iintyatyambo ziqala ukubola.
Yeka umthi omtsha womthunzi ingeniswe eVietnam. Intlakohlaza iza emthini Umthi welilac uzele ziintyatyambo ezimfusa, uphupha udubula ngokupheleleyo – ubuhle bothando obunomtsalane, ivumba elimnandi.
Umthi we-Lilac isityalo esihlala sisisigxina, ngendlela ye-shrub enkulu kunye nobude be-2 – 10 yeemitha. Isityalo sikhula kakuhle kumhlaba one-alkaline kancinane kunye neentyatyambo ngokuthe chu rhoqo ngonyaka ekupheleni kwentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo.
Shumi. Umthi ongenaxhala, sala, thala
Sala iintyatyambo Inephunga elimnandi kakhulu, ivumba elimnandi liphuma kwaye lihle, lithathwa njengentyatyambo engenakukhathazeka okanye idumbara. ISala enentyatyambo epheleleyo ifuzisela uBuddha Dharma (iDharma), yaye uBuddha ekugqibeleni wakhetha phakathi kwezithunzi zale mithi mibini (ubomi obungamawele) ukuba aphumle aze angene eNirvana. Iintyatyambo zifuzisela ubunyulu, zinceda abantu ukuba bakhanyiselwe, kwaye basuse usizi
Iintyatyambo zeSala ziqhakaza unyaka wonke, kodwa ezona ntyatyambo ziqhakaza kakhulu ukusuka ngoFebruwari ukuya kuMeyi.
Ukongeza kubuhle besiqu, amagqabi, iintyatyambo, kunye neziqhamo, iyasebenza nakwiyeza, ukunyanga izifo ezininzi, ngakumbi ezinye izifo ezinxulumene nabasetyhini…
Okwangoku iThang Long Bonsai ibonelela ngazo zonke iintlobo njengomthi womthunzi Eyodwa kwaye inqabile ngasentla, siyakumema ukuba uze kwifama yethu yeThang Long Bonsai ukuze ukhethe umthi owuthandayo, ukuze indawo yakho yasekhaya ihlale iyindawo “xa ungahambi, ufuna ukubuyela” :^^
Ý nghĩa chậu Cây Hoa Quỳnh tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy ! | Hatgiongtihon.net
Cây Quế | Hatgiongtihon.net